निर्देशक घिमिरेको असफल प्रयास, के होला पुष्पल, सहार र श्रद्धाको भविष्य ? - Ratopati
निर्देशक घिमिरेको असफल प्रयास, के होला पुष्पल, सहार र श्रद्धाको भविष्य ?
काठमाडौं –नयाँ कलाकारलाई स्टार बनाउने निर्देशकका सुचि तयार गर्ने हो भने तुलसी घिमिरेको नाम अग्रस्थानमा आउँछ । घिमिरेले थुप्रै नयाँ अनुहारलाई स्टार बनाएका छन् ।
यी नै निर्देशक घिमिरेको पछिल्लो प्रयास भने सफल हुन सकेन । अर्थात उनले आफ्नो पछिल्लो चलचित्र ‘दपर्ण छायाँ २’ मार्फत भित्र्याएका कलाकारलाई भने सफल बनाउन सकेनन् ।
‘दपर्ण छायाँ २’मा घिमिरेले नयाँ कलाकार पुष्पल खड्का ,सहार कार्की र श्रद्धा प्रसाई अभिनयमा डेब्यु गरेका थिए । यी कलाकार लिएर चलचित्र सफल बनाउने र कलाकार पनि चलाउने उनको योजना थियो । तर घिमिरेको यो योजना सफल हुन सकेन ।
अघिल्लो शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘दपर्ण छायाँ २’ले राम्रो ब्यवसाय नगरेको मात्र होइन । चलचित्र अभिनयका हिसावले उनले डेब्यु गराएका कलाकार समेत चर्चामा छाउन सकेनन् ।
घिमिरेले भित्र्याएका कलाकार मध्य चलचित्र चल्नु अगाडि सहारा कार्कीको चर्चा राम्रो चलेको थियो । केही मिडियाले त सहारको बिषयलाई लिएर नेपाली चलचित्र क्षेत्रले बल्ल गतिलो अभिनेत्री पायो भनेर समेत चर्चा समेत गरे । चलचित्रको असफलतासँगै ति सबैको बोलीमा त्यसै बिर्काे लाग्यो ।
‘दपर्ण छायाँ २’ चलचित्र ‘दपर्ण छायाँ’को सिक्वेलको रुपमा निर्माण गरिएको हो । ‘दपर्ण छायाँ’ले ब्यवसाहिक सफलता दिलाउदै कलाकारलाई समेत स्टार बनाएको थियो । चलचित्रको सिक्वेलले भने कुनै कोणबाट घिमिरेलाई फाइदा पुर्याउन सकेन । बरु यसले उनका केही असफल चलचित्रको सुचिमा संख्या थप्ने काम गर्यो ।